Funga nezveCorner Guards kana Uchigadzira Wiricheya Inowanikwa Imba
Kugadzira izvo zvakakwana kufambidzana kumba kwe wiricheya mushandisi zvinenge zvisingaite. Kunyangwe iwe uine yakawanda nzvimbo yeiyo wiricheya kufambisa kubasa kana kumba, iyo wiricheya zvinonzwisisika zvinopinda mumativi emadziro. Kunyangwe iwe uchinyatso chenjera pakuyedza kudzivirira kupunzika mumadziro, haugone kudzivisa kurovera mukati mavo nekusingaperi.
Kubondana kwacho kunotonyanya kukuvadza kana vakarova mativi emadziro. Kudzokororwa kwakadzvanywa nemadziro emadziro kunogadzira kukwenya uye pakupedzisira pendi uye iyo yakaomawall ichatemwa. Rudzi urwu rwekukuvara runogona kukanganisa chimiro chemukati memba yako.
Kune nzira dzekunzvenga izvi zvisina basa kukuvara. Izvo hazvingagone kumisa kana kudzora kufamba kweiyo wiricheya mushandisi; unogona kudzivirira madziro kushandisa makona emakona.
Njodzi Kukuvadza kune yako wiricheya
Makona magadhi anodzivirira makona kubva kune chero netsaona mapundu ne wiricheya. Makona emakona anowanikwa mune akati wandei saizi, maumbirwo uye mavara uye iwe unogona kuzviisa mune chero nzvimbo yemba yako semakamuri ekugara neokudyira, kicheni, dzimba dzekurara nezvimwe.
Sarudzo dzekudzivirira hadziwanzo kuwanikwa kudzimba, dzinowanikwawo kumahotera, nzvimbo dzekutenga, mahofisi eDhokotera, zvipatara nezvimwe. wiricheya mushandisi achashanyira uye zvinongotora kurovera kumwe chete ne wiricheya kukanganisa zvachose kutaridzika kwemukati mako, saka zviri nani kuve nedziviriro munzvimbo.
Makona magadhi anotendera wiricheya vashanyi vanopinda pasina chero matambudziko pavanenge vachidzivirira madziro uye nechitarisiko chemukati.
Kuchengetedza Dzimba Dzako Dzimba kubva wiricheya Mavara
Makona makona anowanikwa kuzadzisa zvaunoda chaizvo. Kana uine nhengo yemhuri iyo ichave iri wiricheya zvachose, pane varindi vepakona vanogona kuiswa nesamende uye ivo vanozogara. Kana iwe uine wiricheya mushanyi kana mumwe munhu ari remara kwechinguva, pane varindi vekona vanogona kuiswa nezvikwiriso zvekushandisa kwechinguva uye vanogona kubviswa pazvisingadiwe.
Iwe unogona zvakare kushandisa varindi vekona kuchengetedza madziro ako kubva kune akasarudzika kutamba vana, mhuka dzinovaraidza kana chete kubva tsaona kazhinji.
Makona emakona akakosha ekudzivirira madziro ako uye kuachengeta akanaka kwenguva yakareba uye iwo anodhura kwazvo.